Izibalo eziya ku-Juliet * ukubukwa okumangazayo enkabeni yedolobha - I-Airbnb
Izibalo eziya ku-Juliet * ukubukwa okumangazayo enkabeni yedolobha
290 okushiwo abanye
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Donata
"Imibono eya ku-Juliet" yindawo emangalisayo enokubukwa okumangazayo kusuka kuwo wonke amawindi kanye ne-balcony, ethandwa kakhulu yizivakashi zethu, enesimo sayo esithandekayo nesingavamile! Itholakala esakhiweni senkathi edolobheni, imizuzu embalwa uhamba ngezinyawo usuka ezindaweni ezidume kakhulu, njenge-Balcony ka-Juliet ne-Arena! Ilungele abantu abashadile nemindeni (amakamelo okulala angu-3). I-Wifi engenamkhawulo. Ukupaka okulula emgwaqweni, noma ukupaka okuphephile imizuzu engu-2 ukusuka efulethini. Ukuxhuma kalula esiteshini sesitimela ngebhasi
* I-WIFI yamahhala esheshayo nengenamkhawulo + i-NETFLIX yamahhala
*I-air conditioned enezihlukaniso ezimbili zendawo yokuhlala nendawo yokulala
* Igumbi lokulala elikhulu elinombhede wendlovukazi (umbhede wezingane utholakala uma ufunwa mahhala)
* Amakamelo okulala amabili ezivakashi anombhede osayizi ababili ngalinye
* amashidi nezingubo zokulala, nokukhetha imicamelo
*igumbi lokugezela eligcwele, iwasha elingaphakathi kweyunithi nokomisa, amathawula, okomisa izinwele, okokuqondisa izinwele, futhi uthola nensipho yezandla, ijeli yokugeza, ishampoo, i-conditioner, nekepisi lokugeza +insipho mahhala
* Igumbi lokuhlala elihlotshiswe kahle liphelele nekhishi elinefenisha ephelele, usofa onethezekile, itafula lokudlela, ihhavini kagesi ne-microvawe, iketela likagesi, abenzi bekhofi be-Italian Espresso LAVAZZA kanye nekhofi yaseMelika, iprosesa encane yokudla, i-42" i-smart screen TV exhunywe mahhala I-Netflix
* I-balcony encane enetafula nezihlalo, ukuze ujabulele kusihlwa sase-Italy esiyela ngasocansini, uphuze iwayini ngenkathi ujabulela ukubuka uphahla lwe-Verona nezakhiwo zalo, kude nomgwaqo kanye nemisindo.
*insimbi nebhodi loku-ayina
*i-alamu yomlilo kanye nomtshina we-carbon monoxide
*ukushisisa kwangasese nge-othomathikhi kanye ne-remote thermoregulation
*UKUBULAWA Amagciwane KANYE NOKUNGANISWA KWE-APARTMENT KANYE NELINEN NGABACWEPHESHE ABAQINISEKILE, UKUZE UKUPHEPHA KWAKHO
I-TV engu- 32" ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix, I-Roku
4.95 · 290 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-290
Umakhelwane ungomdala kunawo wonke e-Verona, futhi udinga nje ukuhamba unqamule i-Ponte Pietra emangalisayo nephakamisayo (inkathi yamaRoma) noma i-Ponte Nuovo, ukuze ube senkabeni yedolobha impela! Igcwele izitolo eziningi, izindawo zokudlela ezijwayelekile, izindawo zokucima ukoma nezindawo zokudlela, inikeza umbono wempilo yansuku zonke ye-Veronese, futhi ngaphakathi sithola izikhumbuzo ezibalulekile nezidumile njengeSonto likaSanta Maria e-Organo, i-Giusti Garden, i-Roman Theatre, i-Castel S Peter kanye neBandla laseSan Tomaso Becket lapho kukhona isigubhu esidumile esidlalwa nguMozart ngokwakhe! Ngaphesheya komfula, imizuzu embalwa ukusuka, i-Piazza Erbe edumile, i-balcony kaJuliet, isonto lombhishobhi laseVerona, kanye nemizuzu embalwa ngezinyawo, i-Majestic Arena.
Ngingajabula ukukwamukela mathupha lapho ufika, kodwa uma uthanda ungangena ngokwakho, ngendlela elula kakhulu.
Ngizokupha imephu elula kodwa ewusizo yedolobha elidala laseVerona ukuze ukwazi ukufinyelela kalula kumasayithi abaluleke kakhulu kanye nomhlahlandlela omncane oneziphakamiso zezindawo zokudlela, izindawo zokucima ukoma, izitolo, nawo wonke amathiphu owadingayo... Ngizohlala ngitholakala ngocingo. , noma imilayezo, yazo zonke izidingo zakho ngesikhathi sokuhlala kwakho!
Ngizokupha imephu elula kodwa ewusizo yedolobha elidala laseVer…